Dastabej » थारु महिला उत्थान केन्द्रले मनायौ ३१ औँ जन्म दिन
थारु महिला उत्थान केन्द्रले मनायौ ३१ औँ जन्म दिन – Dastabej
थारु महिला उत्थान केन्द्रले मनायौ ३१ औँ जन्म दिन
बर्दिया । सामाजिक कार्यमा काम गर्दै आएको गैर सरकारी संस्था थारु महिला उत्थान केन्द्र गुलरियाले बिहिबार आफ्नो ३१ औँ बार्षिक जन्मोत्सब मनाएको छ । उसले लामो सयमदेखि समुदायमा पुर्याएको योगदान बारे चर्चा गरिएको थियो । संस्थाले पछाडि पारिएका समुदाय, सिमन्तकृत समुदायमा जनचेतना जगाउने, महिला सशक्तिकरण, बालविवाह बिरुद्धको अभियानलगायतका विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । सस्थाका कर्मचारी तथा सस्थापक राजकुमारी चौधरीले संचालन गर्नुभएको कार्यक्रमको अध्यक्षता थारु महिला उत्थान केन्द्रका अध्यक्ष लिलावती थारुले गरेकी थिईन । कार्यक्रममा कार्य समितीका उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिब, कार्यकारी निर्देशक, कार्यक्रम व्यावस्थापक, आर्थिक÷वित्त व्यावस्थापक र लिब–वर्ड सस्थाका प्रतिनिधि तथा जिविकोपार्जन कार्यक्रमका प्राविधिक सल्लाहाकार ईन्द्रेश्वर मण्डल र विभिन्न परियोजनाका परियोजना संयोजक साथै अन्य कर्मचारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा थारु महिला उत्थान केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक प्रिज्मासिङ थारुले थारु महिला उत्थान केन्द्रको इतिहास तथा बिगतमा गरेका क्रियाकलापहरु बारे चर्चा गरेकी थिईन । उनले संस्थागत बिकासमा टेवा पु¥याएकोमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदान गर्नुहुने सवैलाई विशेष धन्यवाद दिदै अझै पनि थारु महिला उत्थान केन्द्रलाई अगाडी बढाउन सबैको उत्तिकै योगदान र अपेक्षा रहेको जनाईन । यसैगरी उपस्थित सबै कर्मचारीहरु तथा सन्चालक समिति तथा अन्य सदस्यहरुले पनि सस्थागत विकासका लागि क्षेमता अनुसारको योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सस्थाको जन्मदिनको अवसरमा कार्यालय वरीपरी फुलका विरुवा रोपण गरीएको र कोरोना कहरका कारण धेरै भिडभाड नगरी भौतीक दुरीकायम गर्दै सब्य रुपमा मनाईएको सस्थाका कार्यक्रम व्यावस्थापक तेजमणि पन्तले जानकारी दिए ।
समापन कार्यक्रममा वोल्दै सस्थाका अध्यक्ष लिलावती थारुले वर्दियामा स्थापना भई विभिन्न क्षेत्रको विकास निर्माणमा हातेमालो गर्दै आईरहेको सस्था विगतमा सानो कोठामा कार्यालय राखेर काम गरेको स्मरण गरिन । उनले पछाडी पारीएका तथा विपन्नन वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडी वढ्दै जादा दर्जनौ कर्मचारी, आफ्नै कार्यालय भवन र धेरै सहयोगी हातहरुसगँ सहकार्य गर्ने अवसर पाएको जनाकारी दिए । उनले सस्थाले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै लग्ने र सहयोगी हातहरुको थप योगदानको अपेक्षा गरेको रहेको जनाए ।
२४ असार २०७८, बिहीबार १४:५४ प्रकाशित
संविधान दिवस: पदक वितरण विवाद कसले के भने?
पूजाको विषयमा दुई पक्षबीच कुटाकुट, एकको मृत्यु
सात कैदीबन्दी रिहा
२.	बाँकेमा मजदुरदेखि बिज्ञसम्मको पारिश्रमिक निर्धारण, गोबर माटो र भुसदेखि सुनसम्मको मुल्य तोकियो
३.	कर्मचारीकै मिलोमतोमा नेपालगन्ज भन्सारमा राजस्व छलीः ७ हजार पर्ने समानको मुल्य १००, कारवाहीबाट जोगिन अर्थ मन्त्रालयसम्म दौडधुप
४.	नेपालगन्जस्थित ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सका एरिया सेल्स म्यानेजर माझीले गरे ‘बलात्कार’को प्रयास, मुद्दा चल्यो अभद्र व्यवहार
५.	”मृत शिशु साटिएको” भन्दै भेरी अस्पतालमा रातभरी विवाद, आज छलफल हुँदै
६.	बर्खामा किरननालाको किन भत्काइयो पुल ? गाडी चल्न बन्द, स्थानीयलाई सास्ती
७.	सावधान, बाँकेको पुर्बी गाभरमा मंगलबार पनि देखियो बाघ